Sidee duufaan u samaysmaa | Saadaasha Shabakadda
Duufaan. Eray aad u fiican oo aad rabto inaad maqasho xagaa kasta oo dabayaaqadiisa ah, gaar ahaan haddii roobabku hooseeyeen. Waxay keenaan roobabkii muddada dheer la sugayay, laakiin sidoo kale waxay qaadan karaan saacado iftiin ah, iyagoo keenaya cirka daruuraha.
Si kastaba ha noqotee, haddii xaaladaha saxda ah ay jiraan, waxay noqon karaan astaamo saadaalin kara saadaasha hawada, sida duufaano siyaado ah, oo dabayshoodu ay qaadi karto in ka badan 119km / saacaddii. Aan ogaano sida duufaan loo sameeyo.
1 Sidee loo sameeyaa duufaanno?
2 Noocyada duufaanka
Sidee loo sameeyaa duufaanno?
Duufaannada, aagagga cadaadiska hooseeya, ama duufaannada, sida mararka qaarkood loogu yeero, waxay ka samaysan yihiin aagga isku-dhex-galka isdhexgalka (ITCZ), marka hore ee qabow u kala gudbo mid diiran. Marka sidaas la samaynayo, cufnaanta hawadu way kululaataa, way rogmataa oo waxay ku dhammaataa in lagu xannibo gudaha. Hawo kulul oo xanniban ayaa lagu magacaabaa duufaan, oo saacad u wareegeysa Waqooyiga Hemisphere, ama dhanka saacadda ee dhinaca koonfureed ee Hemisphere.
Waxay la xiriiraan dabaylo xoog leh y sare u qaadista cimilada, oo cirka ku qariya daruuro.
Noocyo dhowr ah oo duufaanno ah ayaa la kala saaray:
Duufaan kuleyl leh: oo loo yaqaanno duufaannada kulaylaha, duufaannada iyo duufaannada, waa duufaanno ka dhasha badweynta kulaylaha caadiyan. Waxay leeyihiin aag adag oo cadaadis hooseeya oo dusha sare ah iyo cadaadis sarreeya oo ku jira heerarka sare ee jawiga. Waxay soo saaraan dabaylo dhan 120km / saacaddii ama wixii ka sareeya.
Duufaanta dabiiciga ah: Waxay ku samaysantaa meelaha latitude ka weyn 30 greater, waxayna ka kooban tahay laba ama in ka badan oo hawo ah.
Duufaan kuleylka ah: waa duufaan ka sameysma latitudes u dhow dhulbaraha.
Duufaantii Polar: duufaantaan ayaa si dhakhso leh u soo baxda, 24 saacadood gudahood. Dhowr boqol oo kiilomitir oo dhexroor ah ayey leedahay dabaylo xoog leh, in kasta oo ay ka yar yihiin kuwa duufaannada.
Mesocyclone: Waa wareeg hawo ah oo qiyaastii ah 2 ilaa 10 km dhexroor ah oo ka sameysma nooc duufaanno ah oo loo yaqaan supercell. Markay daruurtu soo deg degto, xawaaraha wareejinta ee lakabyada hoose ayaa kordha, sidaa darteed daruur faan ah ayaa samaysanta taasoo u horseedi karta duufaan
Duufaanadu waa ifafaalo aad u xiiso badan, miyaanay kula ahayn?
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Duufaannada » Sidee duufaan u samaysmaa
Waa salaaman tahay, waxaan akhriyey "Hawo kulul oo xanniban waxaa loo yaqaan" squall ", oo saacad u wareegeysa Waqooyiga Hemisphere, ama dhanka saacada ee dhinaca koonfureed ee Hemisphere."
Haddii aanan khalad u helin, xinjirowga lidka ku ah Waqooyiga Hemisphere saacad buu u wareegayaa.
Waa hubaal inay jiraan wax aniga iga baxsan, laakiin anigu kama fogaan inaan ka fahmo mowduucan.